Shiinaha oo soosaara baaldi soo saarayaasha iyo alaableyda | MINYAN
Diidmo xirasho wanaagsan, nolol adeeg dheer, qaab dhismeed fudud iyo dayactir ku habboon. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa metallurgy, qalabka dhismaha, warshadaha kiimikada, hadhuudhka, daawada, bacriminta kiimikada iyo warshadaha kale ee baaritaanka qalabka.
Badeecadaha ayaa loo dhoofiyay Koonfur-bari Aasiya, Koonfurta Aasiya, Bariga Dhexe, Bariga Aasiya, Koonfurta Ameerika iyo gobollada kale, tayada wax soo saarkuna waa mid weyn. Awoodda shirkadda ee sahayda waxaa lagu hagaajin karaa waqti la socda shuruudaha dalabka.Alaabtayada waxaa lagu dhejin karaa dhammaan qotomayaasha, waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa macaamilka fadlan noo soo dir sawirro ama moodooyinka qodista. Waxaan nahay warshad sannado badan oo khibrad u leh wax soo saarka, oo ay ku jiraan baaldiyo wax lagu qodayo qaybo OEM ayaa la heli karaa.Damaanad:1 Sannad oo loogu talagalay dammaanad qaadis mashiin
Kartida BixintaKartida Bixinta:50 Gabal / Cadad bishiiba baaldi silsilad ahBaakad & GaarsiinFaahfaahinta BaakadahaFaahfaahinta Baakadaha Sariirta caalamiga ah ama kiiska qoryaha. 1. hal 20GP wuxuu ku shuban karaa 12-14 gogo '1.0m3 ama 1.2m3 baaldiyo oo loogu talagalay qodista 20ton (Width in ka yar 42 inji)2. mid 40HC ah ayaa ku shuban kara qiyaastii 26-28 gogo '1.0m3 ama 1.2m3 baaldiyo oo loogu talagalay qodista 20ton;3. hal 20GP wuxuu ku shuban karaa 8 gogo '1.6m3 baaldiyo 30ton qod; 4. mid 40HC ah wuxuu ku shuban karaa ilaa 16 gogo '1.6m3 baaldiyo 30ton qod.
Dekeddashanghai / Lianyungang / QingdaoWaqtiga Lead:
Tirada (Cadad) 1 - 1 2 - 10 11 - 50 > 50
Est. Waqti (maalmo) 8 30 55 In lagu gorgortamo
Q1. Waa maxay qiimaha kuugu fiican?J: Waxaan nahay warshad toos ah waxay ku siin doontaa qiimaha tartanka ugu fiican.Q2. Sideen kula soo xiriiri karaa? Miyaan ku aaminaa?J: Waad dooran kartaa hubinta ganacsiga sidii habkaaga lacag bixinta oo ilaalin kara dheefahaaga, waxaan nahay dukaan alibaba dahabi ah oo leh saddex xiddigood.Q3aad. Waa maxay muddada bixinta?J: Midowga reer galbeedka, T / T, dammaanad qaadka ganacsiga waa la aqbali karaa.Q4: Goorma ayey noqonaysaa taariikhda aad dhalaysid?J: Badanaa 25-30 maalmood kadib helitaanka lacagtaada, waxaanuna isku dayi doonaa sida ugu fiican inaan u buuxino shuruudahaaga. Waxaan diiradda saareynaa aaminaadda maamulka "Tayada ugu horreysa, Sumcad weyn, Macaamiil ku saleysan".
Hore: baaldi dhagax weyn
Xiga: qashin qubka